Rev: Fandraisana an-tsoratra an-tsary sy horonan-tsary, fandikan-teny, fanazavana, ary Subtitling | Martech Zone
Satria teknika be ny mpanjifanay, matetika dia sarotra ho anay ny mahita mpanoratra manana fahaiza-manao sy mahay. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary reraka tamin'ny fanoratana indray izahay, tahaka ireo mpanoratra anay ihany koa, ka dia nanandrana dingana vaovao izahay. Manana dingam-pamokarana izahay izao izay manangana portable studio podcast amin'ny toerana misy azy - na andefasantsika azy ireo ao - ary manoratra podcast vitsivitsy izahay. Noraketinay an-tsary ihany koa ireo tafatafa. Avy eo alefanay ny feo sy ny horonan-tsary fandikana sy soratra. Avy eo izahay dia manome ny fandikana ireo mpanoratra anay izay manambatra azy ireo amin'ny lahatsoratra lohahevitra navoakanay tao amin'ny bilaogin'ny mpanjifa na mandefa amin'ny tranokalan'ny indostrian'ny antoko fahatelo.
Ny orinasa ampiasainay amin'izany Rev, atolotry ny orinasa video mahatalanjona iarahantsika miasa, lamasinina 918. Ny vidiny dia mora, ny fihodinana tsy mampino, ary ny fahazoana ny fandikanteny no ambony. Rehefa manosika ny mpanjifanay hiditra anaty horonan-tsary bebe kokoa hatrany izahay, dia te-hanoratra ny horonan-tsary amin'ny fotoana tena izy koa satria sehatra be dia be no hijery mialoha ny horonan-tsary nefa tsy milalao feo. Rev dia manome ity serivisy ity koa. Manolotra ireto serivisy manaraka ireto i Rev:
Audio Transcription - ekipa mpandika soratra iray mandray ny fandraisam-peo nataonao ary mandika azy ireo ho marina 99%. Ampidiro amin'ny alàlan'ny Internet ny rakitrao App Transcription iPhone, ary mahazoa transcript iray manontolo ao anatin'ny 12 ora. Ny mpandika teny dia ataon'ny olona fa tsy rindrambaiko fankasitrahana kabary, mba hahafahan'izy ireo misambotra bebe kokoa ny nuance ary amin'ny fahamendrehana avo kokoa noho ny rindrambaiko. Rev dia mahazaka saika karazan-format audio (ao anatin'izany ny MP3, AIF, M4A, VOB, AMR, ary WAV).
Video Transcription - ekipa mpandika soratra iray no mandray ny fandraisam-peo ataonao ary mandika azy ireo ho marina 99%. Ampidiro amin'ny alàlan'ny tranokala ny rakitrao, ary makà transcript feno raha vantany vao 12 ora. Rev ireo matihanina amin'ny horonan-tsary dia mandika an-tanana ireo lafiny tsy am-bava sy manan-danja amin'ny horonan-tsarinao ary ampifanaraho amin'ny fe-potoana hijerena ireo fehezanteny. Rev dia afaka mitantana saika karazana endrika video (ao anatin'izany ny MP4, WMV, M4A, MOV, AVI, VOB, AMR, WMA, OGG). Rev dia manana fidirana amin'ny Youtube sy Kaltura.
Video Caption - Ny fisie rakitra rehetra dia mifanaraka amin'ny FCC sy ADA ary mahafeno ny fepetra Fizarana 508. Ny caption dia mifanaraka amin'ny fenitra Apple, Amazon, Netflix, Hulu ary hafa. Ny mpanjifa dia afaka misafidy amin'ireo endrika fisie marobe (tsy misy fiampangana fanampiny): SubRip (.srt), Scenarist (.scc), MacCaption (.mcc), Text Timed (.ttml), Quicktime Timed Text (.qt.txt) , Transcript (.txt), WebVTT (.vtt), DFXP (.dfxp), Cheetah .CAP (.cap), Spruce Subtitle File (.stl), Avid DS Subtitle File (.txt), Facebook vonona SubRip (.srt ), XML (.xml), sy ny hafa. Alefaso ny rakitrao horonan-tsary, rohy mankany amin'ny horonan-tsarinao voatahiry (sehatra horonantsary an-tserasera, FTP, Dropbox, sns.), Na ampidiro amin'ny API misy azy ireo. Handray rakitra fanazavana azonao ampiasaina avy hatrany ianao, ampidiro amin'ny sehatra safidinao an-tserasera (ohatra Vimeo, Wistia), na ampidiro ao anaty rindrambaiko fanovana horonantsary anao (oh: Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro).
Subtitle Video nadika - Rev mamorona rakitra subtitle fiteny vahiny ho an'ny horonan-tsary. Ireo mpandika teny matihanina dia mampiasa fisie caption master-nankatoavin'ny mpanjifa sy ny horonan-tsarinao mba hamoronana rakitra misy dikanteny amin'ny fiteny sy endrika isan-karazany. Amin'ny alàlan'ny default, ny rakitra Rev subtitle koa dia mifanaraka amin'ny FCC sy ADA. Ny fiteny fandikan-teny dia misy ny Arabo, Bulgarian, Cantonese, Sinoa (nentim-paharazana & notsorina), Czech, Danoa, Holandey, Farsi, Frantsay, Zeorziana, Alemanina, Grika, Hebreo, Hindi, Hongroà, Italiana, Indoneziana, Japoney, Koreana, Norveziana, Poloney, Portiogey (Brezila), Portiogey (Portugal), Romanianina, Rosiana, Slovaky, Espaniola (Eoropeanina, Amerika Latina, Amerikanina Hispanika), Suède, Tagalog, Thai. Tiorka, Okrainiana, ary Vietnamianina.
Ny horonan-tsary Rev matetika momba ny fianarana an-tserasera, ny fampiofanana, ny dokambarotra, ny fitaovana marketing, ny sary mihetsika, ny horonantsary tsy miankina, ary saika ny karazana firaketana rehetra. Afaka mamindra ny fanamarihana fivoriana, vondrona mifantoka, fikarohana amin'ny tsena, resadresaka amin'ny thesis, angona andrana, podcast, horonan-tsary sary, ary saika karazana firaketana hafa. Ny vidin'ny audio sy ny vidéo dia mitentina $ 1.00 isaky ny minitra video, manana 99% fahamarinana ary fihodinana 24 ora, miaraka amin'ny antoka 100%.
Andramo ny Rev Androany!
Disclosure: Mampiasa rohy referral izahay amin'ity lahatsoratra ity ary manome valisoa ho an'ny mpanjifa vaovao rehetra entinay Rev!
Tags: IDAAmazonEspaniola (ovay)AmrpaomaArabosora-peoSerivisy fanoratana audioAVIrakitra mazoto ds dikantenybiolgaraCantonesecheetahSinoa (nentim-paharazana & notsorina)CzechdanoàdfxpDK New MediaAnarana iombonanaFacebook captionsfacebook vonona subripFarsiFrantsayZeorzianaalemainagrikahebreoHindiHuluhongarianaindonezianinaItalianaAnaranaKoreanaAmerika LatinaM4AmaccaptionMOVmp3MP4NetflixNorvejianaFichier son OggpoloneyPortigey (Brezila)Portiogey (Portugal)lahatsoratra mandeha hainganaRevMalagasy RomanianRosianascenaristeSlovakyEspaniôla (eropeanamanafatra fisie SubtitlesubripsoedoaTagalogThai. Tiorkalahatsoratra voafaritralamasinina 918transcriptOkrainianaLahatsoratra Videodikanteny videodikanteny videofandikana videoSerivisy fandefasana horonantsaryvietnamianaVOBWAVwebvttWMAWMVXML
Redirect WordPress amin'ny Header